Posted by ကို Tranquillus | အောက်တိုဘာ 14, 2018 | ရုံး
သင့်အနေဖြင့်လျှောက်လွှာကိုသင့်ကိုယ်စားတင်ခွင့်ပြုရန်၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်းကဲ့သို့သောကျော်ကြားသောဖိတ်ကြားချက်ဖြစ်သော“ Application X အားဖေ့စ်ဘွတ်ခ် (သို့မဟုတ်အခြား) မှသင်၏အချက်အလက်များကိုရယူရန်ခွင့်ပြုပါ”) ကဲ့သို့သောသင်ကလစ်နှိပ်ပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည် စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုပင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်အချိန်မီခွင့်ပြုချက်ရယူထားခြင်းလိမ့်မည်ဟုစိတ်တွင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစဉ်ခွင့်ပြုချက်ဒီလိုမျိုးလကျခံဖို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်, Ergonomics သို့မဟုတ်အပန်းဖြေအဆင့်အထိဖြစ်, ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားရှိခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အချိန်ကျော်, ဤ application များကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများပေါ်တွင်သင်၏ခွင့်ပြုချက်တင်စရာမလိုဘဲထုတ်ဝေ, သင်၏ကွန်ယက်အသုံးပြုမှုကိုနှေးကွေး, ထတည်ဆောက်ရန်စတင်ခဲ့ကြပြီးတခါတရံတွင်ပင်ပင်သူ့ကိုအသိပေးစရာမလိုဘဲအမြင့်ဆုံးလေလံမှ Reseller ပေးတဲ့အဘို့သင့်အထောက်အထားများခိုးယူ။
အကယ်၍ သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာလိမ္မာပါးနပ်သောလူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ သင်သည်မရေမတွက်နိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းခွင့်ပြုချက်များစုဆောင်းထားခြင်းခံရနိုင်ပြီးကွန်ယက်တိုင်း၌၎င်းတို့အားရှာဖွေခြင်းသည်အချိန်များစွာကြာနိုင်သည်။
မလိုချင်တဲ့ applications များနှင့်အတူမယ့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအဆုံးသတ်ဖို့အဆင်သင့်လုပ်ဖြေရှင်းချက်လည်းမရှိအဘယ်ကြောင့်အကြောင်း, ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်ပါသည် လြှောကျလှာ MyPermissions ။
ပြင်သစ်, ဂျာမန်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့မရရှိနိုင်, MyPermissions သင်သာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့ကွန်ရက်များဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်ကိုအသုံးမပြုတော့သို့မဟုတ်လွန်းစပ်စု applications များကိုဖျက်ပစ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကလစ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်။
MyPermissions စစ်ဆင်ရေးအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ပဲသင်၏အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်သော applications များစာရင်းပေါ်လာဖို့သင့်အမျိုးမျိုးသောလူမှုကွန်ယက်မှဒီ app ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
ဤစာရင်းတွင်နှင့်အတူ, သငျသညျအသီးအသီး application များအတွက်ရရှိနိုင်ပါအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ application တစ်ခုသာ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ခိုးယူဖို့အထူးသဖြင့်ကြိုးစားလျှင်သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုလျှင်သင်လည်းသိကြပါလိမ့်မယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို.
ထိုမှတပါး, MyPermissions သင်သည်တစ်ချိန်တည်းကြောင့်အပေါငျးတို့သခွင့်ပြုချက်ပြန်ရုပ်သိမ်းအားဖြင့်သင့်ရွေးချယ်မှုများထဲမှ-click နှိပ်ပြီးလျှောက်လွှာဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုထိရောက်စွာမလိုအပ်သောကြောင်းအားလုံး sorting နေဖြင့်အချိန်ကုန်သက်သာနိုင်ပါတယ်။
ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤအဆင်ပြေဝန်ဆောင်မှုကိုကျေးဇူးတင်အလိုလိုသိနှင့်ထိရောက်သော, သင်ကပ်ပါးကောင်များနှင့်အသုံးမပြုတဲ့ applications များနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရုံပင်ကစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်မှသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ကယ့်ကိုသင်တို့ရှိသမျှသည်အစေခံသောသူတို့အစောင့်ရှောက်မည်။
စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး tool ကို
ထိုမှတပါး, MyPermissions အသစ်သော applications များအမှားက link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အသိပညာမပါဘဲမတပ်ဆင်ရသေးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာတခုပေးပါသည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မသင့်ဒေတာကိုခိုးယူဖို့ကျပ်အင်တာနက်ကိုထောင်ချောက်ထဲကနေတစ်ဦးကကယ်ဆယ်ရေး။
တဦးတည်းကိုအခြား application များကိုဖျက်ပစ်ရန်လျှောက်လွှာကိုသုံးပါလျှင်နေဆဲ MyPermissions လျှင်တစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမမေးနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင့်ရဲ့ဒေတာစုဆောင်းရန်သေးသောအခြားလျှောက်လွှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ချပါ၊ MyPermissions သည်သင့်အချက်အလက်များကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှသိမ်းဆည်းထားရန်ခွင့်မပြုပါ။ သင်ရွေးချယ်လိုက်သော application များကိုဖျက်ရန်ခွင့်ပြုချက်အနည်းဆုံးသာတောင်းခံပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်၏ကွန်ယက်ပေါ်တွင်မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမျှသိမ်းဆည်းထားလိုလျှင်၎င်းကိုအချိန်မရွေးသင်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
Mypermissions နှင့်အတူမိနစ်၌သင်တို့၏လူမှုရေးကွန်ရက်များသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? သြဂုတ်လ 25th, 2020Tranquillus
လွန်ခဲ့သောDiscover AccountKiller, သင် recalcitrant အကောင့်ကိုဖယ်ရှားအထောက်အကူပြုတစ်လောကလုံးကို manual ။
အောက်ပါတစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုအတွက်အီးမေးလ် template ကို